Isicoci senkqubo kunye neAntivirus, iMac yakho ilungele i-euro enye | Ndisuka mac
Ukugcina impilo entle yeekhompyuter zethu zeMac kubalulekile, kwaye ayenzelwanga bona kuphela, kodwa kungenxa yale ndlela umsebenzi wethu wemihla ngemihla uya konwaba ngakumbi, Siya kuba noxolo lwengqondo ukuba yonke idatha yethu ebalulekileyo, iifoto kunye nokunye kukhuselekile, kwaye izixhobo zekhompyutha ziya kuba nakho ukwenza ukuba ii-macOS zisebenze kakuhle kwaye kufanelekile, ngokusebenza okunomtsalane, ukubhobhoza kunye nesantya.
Ewe kuyinyani ukuba iikhompyuter zeMac, nditsho nezona zinamandla mncinci, ngumona ngokwamandla nokusebenza, kodwa kuyinyani ukuba izixhobo zethu zifuna ulondolozo oluncinci ukonwabela impilo entle. Ukulungiselela le nto, uMovavi uyasinika Isicoci seNkqubo kunye neAntivirus, Isixhobo esiluncedo sokucoca ngokucokisekileyo iMac yethu esinokuyifumana ngoku nge-euro enye. Ke ukuba ubukhangela isicelo solu hlobo kwaye uphose ezinye izibonelelo endihlala ndizizisela wena yonke imihla, qhubeka ufunda kwaye ungaphoswa leli thuba.
1 Ikhompyuter yakho ilungile ngeMovavi Inkqubo yokuCoca kunye neAntivirus
1.1 Imisebenzi kunye neempawu
Ikhompyuter yakho ilungile nge Isicoci senkqubo Unqulo lwe-Movavi
Ndiqinisekile ukuba u "Movavi" uvakala ngathi uninzi lwenu, kwaye sele sinizisele ezinye izibonelelo ezivela kwaba baphuhlisi, izicelo zonke ezizalisekisa oko zikuthembisayo, into esisiseko, kwaye ziyenze ngokunikezela ujongano Intuitive kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye ngokusebenza kakuhle. Kwaye namhlanje lithuba lika Inkqubo yokuCoca kunye neAntivirus Movavi, Isixhobo esiza kusivumela gcina iMac yethu icocekile kwaye ingenayo i-malware, kwaye njengesiqhelo, ngendlela elula kakhulu kwaye ekhawulezayo.
Nangona iikhompyuter zethu zeMac kunye nenkqubo ye-MacOS isebenza kakuhle kwaye ikhuselekile, inyani yile inkunkuma ihlala iqokelela eyenza iMac yethu icothe, ke sidinga isixhobo esikhangela inkunkuma kwaye siyenze inyamalale. Kwelinye icala, iikhompyuter kwiapile yokulunywa zifumana umdla ngakumbi nangakumbi phakathi kwabaphuli mthetho, kwaye sele sizibonile izoyikiso ezinkulu apho idatha yomsebenzisi kunye nokhuseleko lusemngciphekweni. Ngethamsanqa ayizukusondela kwiingxaki zokhuseleko kwezinye iisistim, kodwa zikhona, ke nathi siyazifuna Ukukhuselwa kwi-malware, iintsholongwane kunye nezinye izisongelo ze-cyber.
Ewe, ezi ziinjongo ezimbini ezisisiseko esiza kufezekisa ngazo Isicocisi seMovavi kunye neAntivirus, ukuphucula impilo ye-Mac yethu ukuze isebenze kakuhle njengosuku lokuqala, kwaye ugcine ulwazi lwethu lukhuselekile.
Ukuba iMac yakho ayisasebenzi kakuhle njengosuku lokuqala, akufuneki wothuke, yinto eqhelekileyo ukusukela ekusebenziseni uqobo uqokelele uthotho lweefayile ezingafunekiyo ezihlala zifihliwe kwaye asazi nokuba kukho imbali yokukhangela, iifayile eziphindiweyo, ii-cache, iintsalela zezicelo esizikhuphileyo, njalo njalo. Isicoci senkqubo kunye neAntivirus Movavi ikunceda ufumane zonke ezi fayile kwaye uzicime ngendlela elula kwaye ekhawulezayo. Oku kuyakukhulula indawo kwikhompyuter yakho, kwaye iya kuqala ukusebenza ngcono, phantse njengosuku lokuqala olikhuphile ngaphandle kwebhokisi.
Imisebenzi kunye neempawu
Phakathi kwemisebenzi ephambili yesi sixhobo sipheleleyo yile:
Gcwalisa ukucoca yonke le nkqubo Ukucima ngokukhuselekileyo zonke ii-cache kunye neefayile zokungena ezithatha indawo ebalulekileyo kwikhompyuter yakho.
Ukulahlwa okupheleleyo kunye nokukhuselekileyo komgqomo.
Mhlawumbi ukhe wakwenza oko ukuphinda iifayile kwi-Mac yakho, kwaye awuyazi nokuyiqonda; Inkqubo yokuCoca kunye neAntivirus Movavi iya kubafumanisa, ibabonise kuwe kwaye isuse iikopi xa unqwenela.
Uhlalutyo lweHard drive, ukuze ubone zeziphi iifolda ezithatha esona sithuba kwaye mhlawumbi ucinga ngokuyihambisa kwesinye isixhobo sangaphandle.
Ukukhangela iifayile ezinkulu ukuba iapp iyakubonisa uku-odola ukusuka kwelona likhulu ukuya kwelona lincinci. Ngokuqinisekileyo kukho ividiyo elahlekileyo phaya eya kuphumelela indawo elungileyo.
Khipha usetyenziso ngokupheleleyo nangokukhuselekileyo, Ukususa zonke iifayile kunye nokuhlala okunxulumene nazo.
Ukucima umlilo Ikhusela ekuhlaselweni kwaye ungenza ngokusesikweni ngemithetho eyahlukeneyo.
Antivirus, ukukhusela ikhompyuter yakho kwi-malware.
Imemori yasimahla, ukuze ikhompyuter yakho isebenze ngokutyibilikayo.
Njengoko ubona, sijamelene nesicelo esipheleleyo ngexabiso elinye, silungele ukuba izixhobo zakho zisebenze ngokusemandleni, kwaye idatha yakho ikhuselekile.
Inkqubo yokuCoca kunye neAntivirus Movavi Inexabiso eliqhelekileyo le-14,99 euros kwiVenkile yeApple yeMac, nangona kunjalo, njengenxalenye yokukhuthazwa kweVenkile yeApple yeeVenkile, ngoku ungayifumana ngesaphulelo esingaphezulu kwamashumi alithoba eepesenti. ngee- € 1,09 kuphela. Isicelo sihambelana ne-OS X 10.7 ukuya phambili, ikwiilwimi ezininzi, kubandakanya iSpanish, kunye Unyuselo luphela ngomso, ngolwesiHlanu, ngoMeyi 12. Ke ngoko, ukuba ubukhangela isixhobo esifana nesi, ndikucebisa ukuba ungasicingi kwaye ubambe Inkqubo yokuCoca kunye neAntivirus Movavi ngokukhawuleza ukuze uzuze kwisibonelelo. Ukuba ekugqibeleni ayihlangabezani nolindelo lwakho, ungayibuyisa kwaye ufumane imali yakho.
QAPHELA: nokuba andiveli kwaMac kwaye andinabudlelane nomphuhlisi wale sicelo okanye ngesaphulelo kunye neemeko ezibonelelweyo, kungoko sinokuqinisekisa ukusebenza kwayo ngexesha lokupapashwa kwale posi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Isicoci senkqubo kunye neAntivirus, iMac yakho ilungele i-euro enye
I-Apple ibhengeza uLwandiso lweZiko ledatha laseReno